चीनसँगको ट्रेडवारमा ट्रम्पको गेमप्लान चुक्यो, अमेरिकाको भनाई मानिदिँदा चीनलाई के फाइदा ? | Jukson
चीनसँगको ट्रेडवारमा ट्रम्पको गेमप्लान चुक्यो, अमेरिकाको भनाई मानिदिँदा चीनलाई के फाइदा ?
पोखरा, पौष १
ट्रम्पको चीनसँगको ट्रेडवारले केवल अमेरिकाको ब्यापार घाटासँग मात्र सम्बन्ध राख्दैन। यो विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको शक्ति प्रतिस्पर्धा पनि हो।
ट्यारिफहरु केवल यस सतहमा देखिन आएका विषय मात्र हुन्। अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने ट्रम्पको एजेण्डालाई बल पुर्याउनका लागि सुरु भएको ट्रेड वार अन्नत अमेरिकाकै पक्षमा नहुने देखिएको छ।
ट्रम्प अमेरिकी कम्पनीहरुको ब्यापार समुन्द्र पारसम्म फैलाउन र अमेरिकामा गुमेका रोजगारी फर्काउन चाहन्छ। यसैका लागि उपयुक्त माहौल बनाउनका लागि ट्रम्पले चीनमाथि बिभिन्न आरोप लगाउँदै ट्रेड वार सुरु गरेको थियो।
ट्रम्पको ट्यारिफलाई जस्टिफाइ गर्नका लागि अमेरिकाले चीनमाथि बौद्धिक सम्पत्ती चोरीको आरोप लगायो। यसैगरी उसले चीनले बिदेशी फर्महरुलाई चीनमा काम गर्दा अनावश्यक प्रतिबन्ध हस्तक्षेप र बन्देज लगाएको पनि आरोप लगाएको छ। चीनले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरुको बिस्तारका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने र सस्तो उत्पादन ल्याउनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कारण चीनले विश्व बजार बिगारेको आरोप पनि अमेरिकाले लगाएको छ।
एक किसिमले हेर्दा चीनमाथि अमेरिकाले गर्दै आएका गुनासा तथा आरोपहरु आधारहीन भने छैन।
चीनले बौद्धिक सम्पत्तीको अधिकर संरक्षणका विषयमा केही प्रश्न गर्न मिल्ने गरीका अबैधानिक काम गरेको तथ्य छ। त्यस्तै चीनमा लगानी गर्न पुगेका बिदेशी कम्पनिहरु माथि पनि चीनले अंकुश लगाएको छ। उनीहरुलाई स्थानीय साझेदार चयन गर्नेदेखि प्राविधिक साझेदारी गर्न बाध्य पार्नमा पनि चीन सरकारको दर्हो हात रहेको छ।
चीनमा बिदेशी ब्यापार स्वामित्व लिनेले चयन गर्ने स्थानीय साझेदारहरुले बिदेशी कम्पनीका उच्चस्तरीय प्रविधिहरु पनि शेयर गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था छ।
चीनमा बिदेशी कम्पनीहरुले नयाँ लगानी ल्याउँदा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी बन्देज गरिएको छ। चीनले यस्तो औद्योगिक नीति लिएको छ जसबाट केही चुनिएका चिनियाँ कम्पनीहरुले सरकारको संरक्षण प्राप्त गरेका छन्। मेन इन चाइना २०२५ अन्तर्गत चीनले ति उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको हो।
यी र यस्तै परिस्थितीबाट सुरु भएको ट्रेडवारलाई साम्य गर्नका लागि यदि चीनले ट्रम्प प्रशासनले भने जस्तै सबै मागहरु पूरा गरिदिने हो भने कस्तो अवस्था आउला ?
यदि त्यसो हुने हो भने यसको सामान्य अर्थ चीनको बजार पहिलेभन्दा धेरै नै बढी खुला र बिदेशी कम्पनीहरुका लागि संचालन सहज हुँदै जानेछ। यसमा अमेरिकी कम्पनीहरु पनि पर्छन्। बौद्धिक सम्पत्तीको संरक्षण गर्ने बलियो नीति लिएको खण्डमा धेरै बिदेशी कम्पनीहरुले आफ्ना उच्चतम प्रविधि चीनमा प्रयोग गर्नेछन्।
यसबाट कम्पनीहरु उत्पादनमा बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछन्। यसपछि बिदेशी कम्पनीहरुले चीनले कपी क्याट बस्तुहरु उत्पादन गर्छ भन्नेमा पनि डराउनु पर्दैन। उनीहरुले चीनमा निर्वाध कम्पनी संचालन हुने अवस्था सिर्जना भएको आभाष हुन थाले सहायक कम्पनीहरुलाई समेत बिस्तार गर्न सक्ने थिए।
चीनले लचकता अपनाउन सकेमा बिदेशी कम्पनीहरुले स्थानीय साझेदार राख्न जरुरी भएको खण्डमा मात्र राख्ने अवस्था आउँछ। यसबाट बिदेशी कम्पनीहरुलाई ब्यापारमा आवश्यक भएमा मात्र स्थानीय साझेदार राख्ने वातावरण बन्छ न कि बाध्यता। सरकारको अनुदानबिनाका चिनियाँ कम्पनीहरु र बिदेशी कम्पनीहरुले प्रतिश्पर्धामा उत्पादन थाल्ने मौका पाउने हो भने बिदेशी बजारमा मात्र होइन चीनको आन्तरिक बजारमा ब्यापारको ठूलो प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
ब्यापार नीति परिमार्जनकालागि चीन बिस्तारै तयार भैरहेको संकेत पनि देखिन थालेको छ। चीनले आवश्यक केही नीति परिमार्जन गरी ट्रम्प प्रशानसनले चाहे जस्तो शैलीमा कार्यान्वयन गर्न लागेको विश्लेषण समेत भैरहेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र सीबीच गत डिसेम्बरमा ९०–दिन व्यापार युद्धलाई रोक्ने र विवादलाई साम्य पार्ने पहल थाल्ने सहमति भएको थियो। ९० दिनको यो अवधिमा चीनले खुला बजारमा सुधारात्मक परिमार्जनहरु गर्नकालागि लागिरहेको छ।
यसै क्रममा अधिकांश उच्च चिनियाँ नीति निर्माता तथा सरकारी अधिकारीहरुले पनि ट्रम्प प्रशासनले चीनललाई निर्णयात्मक ढंगले अघि बढ्न घच्घच्याइरहेकोमा खुशी भएको बुझिएको छ।
चीनले आफ्नै देशको हितका लागि यो सबै प्रक्रियामा भाग लिइरहेको आन्तरिक रुपमा संचार गरेपनि यसले ट्रेड वारलाई अघि बढाउनबाट रोक्ने मात्र होइन चीनकै बजारका लागि पनि सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ।
नयाँ चरणमा हुने खुला र उदार बजार तथा नीतिगत सुधार चीनका लागि निकै फाइदाजनक हुनेछ। बिदेशी कम्पनीहरुलाई मात्र होइन चिनियाँ कम्पनीहरुलाई पनि बौद्धिक सम्पत्तीको बलियो संरक्षण उत्तिकै चाहिएको छ। अन्तराष्ट्रिय सिकाइहरुले के स्पष्ट भैसकेको छ भने बिदेशी कम्पनीहरुलाई चीनमा पूर्ण स्वामित्वमा संचालन गर्न दिनुले वास्तवमा प्रविधि र ज्ञानको धेरै र तीब्र बिस्तार हुने र यो सिकाइ चीनकै लागि सहयोगी सावित हुनेछ।
चीनले आफ्नो मेड इन चाइना २०२५ कार्यक्रमलाई त्याग्ने छैन। नीतिमा परिमार्जनपछि यसकालागि हुने कार्यक्रमलाई अझ बल पुग्नेछन्।
चीनमा जति धेरै बिदेशी कम्पनीहरुको प्रवेश भयो उति नै नयाँ प्रविधिहरु आउँछ यसबाट चीनकै आन्तरिक बजार अझ बढी डाइनामिक र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। प्रतिस्पर्धा जति गहिरियो नयाँ आविष्कारहरु पनि उति नै छिटो छिटो हुन्छ। यसबाट चीनकै मेड इन चाइना २०२५ कार्यक्रम सफल हुन्छ।
यसबाट ट्रम्प प्रशासनलाई के फाइदा पुग्लारु ट्रम्पको गेम प्लान अनुसार नै चीन चलेमा पनि अमेरिकाले चाहेको जस्तो हुन्छ त ?
यदि चीनले ट्रम्पले चाहे जस्तो गरेमा अमेरिकाको चाहाना भन्दा ठिक बिपरित परिस्थिती उत्पन्न हुनेछ। धेरै अमेरिकी कम्पनीहरुले चीनमा अझ बढी लगानी गर्नेछन्। चीनले लगानी तथा खुला बजार संचालनको वातावरण बनाएमा चीन संसारकै सबैभन्दा तीब्र बृद्धि हुने बजार बन्नेछ जसबाट अमेरिकी कम्पनीलाई चीनमा लगानी गर्नुको बिकल्प नै हुँदैन।
समय यस्तो भएको छ कि यदि चीनले ट्रम्पकै भनाई अनुसार बजार नीति संशोधन गरेमा ट्रम्पको इच्छा बिपरित अमेरिकी कम्पनीहरु नै आफ्नो गुन्टा बाँधेर ब्यापार गर्न चीनतिर लाग्नेछन्।
युएईका मानव संशाधन मन्त्रीले गरे नेपाली कामदारको प्रशंसा